Location : Australia Updated Date : 02,July 2019 Starting Price : AUD700,000
Address : 1-13 Cobden Street, South Melbourne Victoria, 3205 AUSTRALIA
Completation : End of 2021
Developer : Young Group & Holder East
Total Floor : 19 floor
Unit Mix : 1Bedroom, 2Bedroom, 3bedroom and Penthouse
Per Square Feet : AUD1022
‼️OASIS Residance ‼️
📍Location - Melbourne CBD Area ကို ၁၀မိနစ် အတွင်း Direct Transport နဲ့ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး နာမည်ကြီး Royal Botanical Garden ၊ Albert Park Lake နဲ့ Victoria Art Precinct တို့က ဝန်းရံထားပါတယ်။
📖Education - University of Melbourne ကို ၁၀-၁၅ မိနစ် ကားမောင်းရုံ နဲ့ရောက်ရှိနိုင်တဲ့ အပြင် Wesley College, Melbourne Grammar School, Victorian College of Arts တို့ရဲ့ အနီးနားတွင် တည်ရှိပါတယ်။
🚋Transportation - ၃မိနစ် လမ်းလျှောက်ရုံဖြင့် Trams stop နဲ့ Future ANZAC Station ကို ရောက်ရှိနိင်မှာဖြစ်တဲ့ အပြင် Melbourne International Tullamarine ကို ၂၅ မိနစ် အတွင်းသွားလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
🚴🏻‍♀️🏌🏻‍♂️🏓 Entertainment/ Arts / Sports - Crown Entertainment Complex (Casino), South Melbourne Market, Albert Park Golf Course နဲ့ Melbourne Sports & Aquatic Centre များလည်း အနီးတဝိုက်တွင် တည်ရှိလို့ Activity ကြိုက်သူများအတွက်လည်း အဆင်ပြေလှပါတယ်။
❗️Room Types - 1Bedroom, 2Bedroom, 3bedroom and Penthouse များကို Australian Dollar 500,000 မှစပြီး ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
‼️‼️အချိန်နဲ့ တပြေးညီ နိုင်ငံ တကာမှာရောင်းချနေတာဖြစ်လို့ ဈေးအတန်ဆုံးနဲ့ အခန်းဖွဲ့စည်းပုံအကောင်းဆုံးကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်ရလေအောင် တုံ့ဆိုင်းမနေပဲ YPF နဲ့အမြန်ဆက်သွယ်ပြီး Booking Fees ချထားမှစိတ်ချရမယ်နော် ‼️‼️🤩
📌အသေးစိတ်ဆွေးနွေးလိုပါက ကြိုတင်ရက်ချိန်းယူပြီး YPF ရုံးသို့လာရောက့် လေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်📌
𝟎𝟗𝟕𝟕𝟒𝟒𝟒𝟗𝟒𝟐𝟗/ 𝟎𝟗𝟕𝟕𝟎𝟕𝟒𝟖𝟓𝟖𝟐/ 𝟎𝟗𝟕𝟗𝟔𝟐𝟎𝟏𝟒𝟎𝟔
♻️ 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 𝗛𝗼𝘂𝗿𝘀 :𝟭𝟬𝗮𝗺 𝘁𝗼 𝟱𝗽𝗺
🏢 𝗟𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 :𝗡𝗼.𝟰𝟱𝟵𝗔, 𝗥𝗼𝗼𝗺 𝟳𝟬𝟰, 𝗡𝗲𝘄 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗔𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗥𝗼𝗮𝗱, 𝗕𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗧𝗼𝘄𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽.
$311100 (USD) For Sale
LT1906005924: 3BR unit for rent in Mingalar T/N
$3300/mo (USD) For Rent
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခွင့် Visa လက်ဆောင်ပေးမည့် အကြီးဆုံ...
ရွှေမန်းသူ ရွှေမန်းသားများအတွက် သတင်းကောင်း
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်သည့် လူကြိုက်အများဆုံ...
Fundraising and Charity Bazzar
YPF Team Night out
YPF Team celebration
LT1803000524: Landed House for rent in North Dagon.
LT1803000472: Landed House For Sale in North Okkalapa.
LT1803000104: Landed house for rent in Bahan
LT1803000063: Landed House For rent in Tharkayta.
LT1802000047:2storey house for rent in Kamaryut.
LT1805002825: Commercial Property for rent in South Okkalarp...